Ajọ Ifufe Irma, nke kachasị ike na akụkọ ihe mere eme na Atlantic, na-emebi oke mbibi | Netwọk Mgbasa Ozi
A hụrụ Hurricane Irma site na International Space Station
Irma abụrụla ugbu a ajọ ifufe kachasị ike na akụkọ ntolite emere na Atlantic. Na ụfọdụ ifufe na-adịgide adịgide nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300km / h, na nha nke yiri nke France, na-aga n'ihu na-ebute oke mbibi. Ike ya dị ukwuu nke na ọbụna seismographs nwere ike ịhụ ọkwa ya. O metụla agwaetiti ndị dị na Caribbean nke Anguilla, Antigua na Barbuda. Ma ugbu a, ọ na-aga Cuba, Puerto Rico, na Steeti Florida.
Onye isi obodo nke Miami-Dade, Carlos Giménez, ekwenyela na "Ajọ Ifufe Irma na-anọchite anya oke iyi egwu na Florida, South-Dade na mpaghara anyị ọkachasị". Enwere iwu mbugharị ọtụtụ mmadụ na mpaghara dị iche iche. Nakwa ha enyela maapụ maka ndị bi na Miami na ebe ndị dị nso, na mpaghara ọpụpụ na-adabere n'ihe ize ndụ nke ịnọ ebe ahụ n'oge oke ifufe ahụ. Na mgbakwunye na ifufe siri ike, a na-atụ anya oke mmiri ozuzo na idei mmiri dị egwu ebe ọ bụla ọ gafere.
Ọnọdụ zuru oke nke nyegoro Irma
Site na ịdọ aka na ntị nke ndị na-ahụ maka ihu igwe, na kwa ọnọdụ nke ọnọdụ mberede, ha na-emesi nke ahụ ike mmetụta ya nwere ike bụrụ ọdachi karịa ka a tụrụ anya ya. Ezigbo ihe atụ bụ Harvey, bụ onye gbasiri ike nke ukwuu tupu ya erute ala. Irma, n'agbanyeghị iru ogo 5, o yighị ka ọ na-agbaso usoro nkịtị nke oke ifufe Atlantic. Ọ na-abụkarị mgbe ajọ ifufe ruru oke otu, ha na-adịkarị "na-emebi emebi", ọ na-abụkarị ihe a na-adịghị ahụkebe. Irma diri.
N'ime ihe ndị kachasị dị mkpa, oké osimiri dị n'etiti 1 na 1ºC ọkụ, nke na-eme ka ajọ ifufe dị ike karị. Ikuku ikuku dị obere, ya bụ, ikuku nwere ike ịfefe ma pụọ. Enweghị igwe ojii nke uzuzu sitere na Sahara na-ekesa na Atlantic, na ọ bụ ngwa ngwa nke na mmiri ọkụ na-ebili site na ajọ ifufe nwere mmetụta na ọnọdụ okpomọkụ ya. Na mgbakwunye na eziokwu na ọ kabeghị ọdịda ala, ihe ndị a niile emeela ka Irma bụrụ ihe ọ bụ.
Ajuju ka fodoro ma na-ekwukwa n’oge na-adịbeghị anya bụ, aga-eme ka ọnụ ọgụgụ Saffir Simpson ruo ngalaba 6?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Hurricane Irma, nke kachasị ike na akụkọ ihe mere eme na Atlantic, na-ebibi nnukwu mbibi
Mgbanwe ihu igwe ga-ebute ikpochapụ nje ndị ọzọ